Iphakheji engxamisekileyo yeFektri | Kwichina Abavelisi bephakheji engxamisekileyo, abaXhasi
Inqanaba lokusetyenziswa kweemoto zamandla aphezulu liyenyuka kwaye liphezulu, kunye nokuhamba rhoqo kweengozi zomlilo kuya phezulu kakhulu kunangaphambili. Ukufumana izakhono ezisisiseko zokubaleka ngokungxamisekileyo, kubalulekile ukuba ube nephakethe yomlilo ongxamisekileyo ekhaya.
Ikhithi yentlekele yendalo
Xa iintlekele zemvelo ezinje ngeenyikima, iitsunami, udaka, izaqhwithi zenzeka nasemva kweentlekele, zibonelela ngokutya okunika ubomi, amanzi, izinto zoncedo lokuqala, kunye nezinto zongxamiseko ukuze zisinde.
Ikhithi ye-Headrest kit-yexesha likaxakeka
I-Headrest Kit yenzelwe ukubonelela abasebenzi ngokufikeleleka ngokulula nangokukhawuleza ukuhambisa isingxobo sezonyango esonyuka ngokulula kwintloko yentloko yesithuthi. Ibhendi enkulu ye-elastic igcina ibhegi yekiti ibekwe ngokukhuselekileyo, ngelixa imitya yokuncamathelisa ehlengahlengisiweyo igcina ikiti iqinile ngakwisihloko sentloko. Icala lokuqina lokutsala izibambo zivumela ukuba ibhegi yekiti isetyenziswe ngokukhawuleza macala omabini endawo.
Ikhithi yokuhlangula ngokungxamisekileyo
Ikhithi yokuhlangula ngexesha likaxakeka yenzelwe njengesixhobo sokuqala esiphathwayo kwindawo yokusebenza. Ipakishwe kwingxowa yenayiloni evaliweyo ehanjiswa ngokulula ukuya kwicala lesigulana, le khithi inika amandla okunyanga ezona ndawo zixakekileyo emsebenzini kunye nesibonelelo esongeziweyo sokukwazi ukulawula ukopha okukhulu ngeTourniquet, eyona tyelelo ikhuselekileyo kunye neyona isebenzayo imarike namhlanje.